DEG DEG:-Ciidamo hubeysan oo Xildhibaano u diiday inay galaan Xarunta Barlamaanka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ardaan Yare 31 March 2021 31 March 2021
“Isgoyska Dabka ayaa Ciidamo Farmaajo ka amar qaata hada nagu hortaagan yihiin aniga iyo Xildhibaano kale. Mas’uuliyada wixii na soo gaara Maxamed Mursal ayaa qaadaya” ayuu yiri Xildhibaan Mahad Salaad oo ku sugan Isgoyska Dabka.
Ciidamo farabadan oo ka tirsan kuwa Booliska iyo NISA ayaa saakay la dhigay waddooyinka laga soo galo iyo kuwa kabaxa Xarunta Madaxtooyada, waxaana la siiyay Ciidamada Sawiradda iyo Magacyada Xildhibaanada laga joojiyay kulamada.
Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa Maanta kulan ku yeelanaya Xarunta Villa Hargeysa, waxaana laga Xildhibaanada qaarkood ay sheegeen in laga cabsi qabo in Golaha Shacabka oo muddo kororsi sameeyo.